फेरी समीक्षा अधिकारीले तक्दिरमा नभए पनि दिल बसेको कुरा गरिन सार्बजनिक (भिडियो सहित ) - Mitho Khabar
May 28, 2022 mithokhabarLeaveaComment on फेरी समीक्षा अधिकारीले तक्दिरमा नभए पनि दिल बसेको कुरा गरिन सार्बजनिक (भिडियो सहित )
लामो समय व्यक्तिगत समस्यामा झेलिएकी गायिका समीक्षा अधिकारीको पछिल्लो गीत “कदमैको छायाँ” मार्फत बजारमा उनी देखा परेकी हुन् । समीक्षा र हिमाल घलेको स्वर रहेको गीत “कदमैको छायाँ” धादिङ गोरखा तिरको मौलिक लोकशैलीलाई समेटर तयार गरिएको छ ।
आफ्नै गाउँको सेरोफेरो, ग्रामीण परिवेशसँगै जोडिएको मायाप्रेमपूर्ण गीतमा लोकप्रिय सर्जक रमेश बिजीको शब्द सृजना रहेको छ । तक्दिरमा नभए पनि दिल बसेको कुरालाई गीतमा समावेश गरिएको छ । गीतको एरेञ्ज भने सागर विरहीले गरेका हुन् । गीतको कोरस गायनमा भिमु गुरुङ, सागर विरही, विन्दा परियारले साथ दिएका छन् ।
उनको कर्णप्रिय स्वरमा मौलिकता झल्काउने गीतहरु बजारमा धेरै छन् । पछिल्लो समय संगीत सिर्जनामा तयार भएको गीत ‘कदमैको छायाँ’ बजारमा आएको छ ।
उक्त गीतको भिडियोमा लोकप्रिय निर्देशक प्रकाश भट्टले निर्देशन तथा कोरियोग्राफी गरेका हुन् । गीतको सम्पादन विष्णु शर्माले गरेका छन् भने नवराज उप्रेतीको छायांकन रहेको छ । सो गीतको भिडियोमा सुधिर श्रेष्ठ र आश्विनी शाहीले फिचरिङ गरेका छन् ।
पैसा आउँदा कहिल्यै नगर्नुस् यी काम, रिसाएपछि छोडिन् माता लक्ष्मी ! त्यसपछि आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्छ
कृषकको माछा पोखरीमा विष हालेर २२ हजार माछाको भुरा मारियो
दुईभन्दा बढी केटिसंग बिहे गर्न नमाने पुरुष जेल जानुपर्ने ! आयो यस्तो खबर
अभिनेत्री पूनम पाण्डे भक्कानो छोडेर रुँदै भनिन् ‘म महिनावारी भएको छैन’
April 23, 2022 mithokhabar
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्ण पाठसहित): अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द